Sagaalkaan Calaamadood Hadaad Ninka Ku Aragto Waa Ku Jecelyahay - Aayaha
Shabakadda Aayaha Online, ayaa waxay idiin soo gudbineysaa 9 calaamadood oo muujinaya inuu ninka ku jecelyahay xittaa haddii uusan ku oran.
1. Waa mid kuu naxariista
Nin ku jecel waxa uu noqonayaa mid naxariis badan, inkastoo ay waajib kugu tahay inaad taxadartid maadaama ay jiraan rag sheegta inay naxariis badanyihiin balse leh ujeedooyin gaar ah, si kastaba ninka si dhab ah kuu jecel waa uu kuu naxariinsanayaa isagoon kaa filaneyn taas wax bedel u ah.
2. Wuu jecelyahay inuu arko farxaddaada
Xittaa isagoon aanan kuu sheegin inuu ku jecelyahay, haddii ay farxaddaada dhib ku heeyso oo dhibaato u arko marka uu isha ku saaro adigoon faraxsaneyn waa jacayl. Haddii ninka uu jecelyahay inuu Arko adigoo faraxsan way cadahay waana garan kartaa.
3. Wuxuu ku arkaa qof qurux badan
Jacaylka wuxuu ninka ka dhigi karaa mid kuu arka qof aad u qurux badan xittaa marka aadan dareemin in muuqaalkaaga uu yahay dhex dhexaad. Jacaylka wuxuu kaaga dhigi adigoo cillado leh mid qurux badan. Haddii uu kuu arko gabar qurux badan dhib malahan hadaad xitaa fool xuntahay waa calaamad jacayl.
4. Wuxuu qiimeeyaa ra’yigaaga
Xaqiiqda waala sheegay, nin kasta ma qiimeeyo ra’yiga haweenka, balse ninka ku jecel ayaa taas sameeya. Waana kaas jacaylka dhabta ah ee keena qadarinta; haddii uu qiimeeyo isla markaana qadariyo fekerkaaga waaku jecelyahay.
5. Wuuku qadariyaa
Makugula dhaqmaa qaab xushmad ku dhahantahay ama wuxuu kuula dhaqmaa sidii shaqaale oo kale ama booyaas? Ninka jecel haweeneydiisa aad ayuu u qadariyaa; wuxuu qadarinayaa fekerkaaga, iyo dareenkaaga —- wuxuu sidoo kale qiimeynayaa jirkaaga, gacana kuuma qaadayo.
6. Mudnaan ayuu ku siiyaa
Marka uu nin kaa dhigo mudnaantiisa, waxay muujineysaa inuu ku qiimeeya isla markaana aad muhiim u tahay. Tani waxay ku tusineysaa jacaylka uu kuu qabo iyo sida uu kuu qiimeeyo xittaa haddii uusan afka ka oran.
7. Wuxuu kuula dhaqmaa si kalgacayl leh
Haddii uusan ahayn nooca qeyliya ee canaanta badan ama kugu qasba waxa uu rabo ama uu aqyaar kuu yahay isla markaana si wanaagsan oo qurux badan kuugula dhaqma kaasi waa nin ku jecel xittaa haddii uusan oran.
8. Wuxuu kuu arkaa qeyb kamid ah mustaqbalkiisa
Marka uu nin jecelyahay xaaskiisa, waxa uu ka dhigtaa qeyb kamid ah noloshiisa, balse haddii uusan taas sameynin, wuxuu kuu arkayaa kaliya jacayl kumeel gaar ah. Haddii aad tahay qeyb weyn oo kamid ah mustaqbalkiisa isla markaana kaa dhigay qeyb kamid ah qorshahaas, waaku jecelyahay.
9. Wuxuu necebyahay murugadaada
Haddii uu necebyahay inuu arko adigoo murugeysan, ama uu necebyahay marka uu kaa careysiiyo, waaku jecelyahay wuxuuna qadariyaa dareenkaaga. Marka uu ku raali geliyo qaladkii uu sameeyay sababta ayaa ah inuu daneeynayo dareenkaaga.
4 Waxyaabood Oo Haweenku Ka Helaan & Ragga U Sameeya Oo Ay Aad U Jecelyihiin